Lenovo Thinkbook 14-IML(i5-10thGen) (20RV009CVN)-3 – ICT.com.mm
UP TO 37% OFF, FUJI Xerox
HomeLenovo Thinkbook 14-IML(i5-10thGen) (20RV009CVN)-3
Lenovo Thinkbook 14-IML(i5-10thGen) (20RV009CVN)-3
20RV009CVN NB0010201 Processor: Intel® Core™ i5-10210U Processor (6MB Cache , 1.60GHz up to 4.2 GHz) Memory: 8GB DDR4 2666 (Onboard) + 1 Slot Storage: 256GB SSD M.2 2280 NVME + Support (HDD... [Learn more]
Brand: LenovoSKU: 152949N/ASee more: Computer Systems, Laptops / Notebooks, Lenovo, New Arrivals, ProductsFilter by: Laptops (PC), USD
Processor: Intel® Core™ i5-10210U Processor (6MB Cache , 1.60GHz up to 4.2 GHz)
Memory: 8GB DDR4 2666 (Onboard) + 1 Slot
Storage: 256GB SSD M.2 2280 NVME + Support (HDD / SATA)
Display/Monitor: 14.0″ FHD TN AG
Others: Finger Print
Wireless Card: WLAN 1X1AC+BT
လုပ်ငန်းသုံးအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဒီဇိုင်းသပ်ရပ်ပြီး စွမ်းရည်မြင့် Laptop ကောင်းကောင်းလေးတစ်လုံး လိုချင်တယ်။ ဒေတာတွေအများကြီးကို သိမ်းစရာမလိုသလို ဂရပ်ဖစ်ကတ်မပါလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ဒီ Lenovo Thinkbook 14-IML လေးက ရွေးချယ်ဖို့ စဉ်းစားသင့်တဲ့ Laptop တွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ မြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိဖို့ နောက်ဆုံးပေါ် i5-10 th Gen Processor က မောင်းနှင်ပေးမှာဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းသုံး Software တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ အားကောင်းတဲ့ CPU နဲ့အတူ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ DDR4 RAM 8GB (2666MHz) ကို တွဲဖက်တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ RAM Slot အလွတ်တစ်ခုပါဝင်သေးတဲ့အတွက် RAM အသုံးပြုမှုအရမ်းမြင့်တဲ့ Software တွေကို အသုံးပြုရလို့ RAM ထပ်မြှင့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ Laptop ရဲ့ Windows အဖွင့်/အပိတ်၊Software အဖွင့်/အပိတ်တွေအပြင် Laptop ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြန်သထက်မြန်ဖို့အတွက် HDD ထက် ဒေတာအသွင်းအထုတ် အဆပေါင်းများစွာမြန်ဆန်တဲ့ M.2 SSD 256GB ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ OS အဖြစ် Windows 10 Pro ကို ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့်မိမိရုံးမှာကျန်ခဲ့တဲ့ Computer ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Remote Desktop လို အမိုက်စားလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒေတာပမာဏ 256GB ပဲ Laptop ထဲမှာသိမ်းဆည်းနိုင်ပေမဲ့ ရုံးအထိုင်ကွန်ပြူတာ/ဆာဗာက ဒေတာတွေကို Remote Desktop နဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဒါ့အပြင် HDD/SATA ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အတွက် HDD တစ်လုံးထပ်စိုက်ပြီး Hybrid Drive အဖြစ်ဒေတာသိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ ပမာဏကို တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကို ကျစ်လျစ်တဲ့ 14” အရွယ်အစားနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး Full HD ရုပ်ထွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည်လင်တောက်ပတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Anti-glare နည်းပညာပါဝင်တာကြောင့်ဘယ်လိုအလင်းအနေအထားမှာမဆို အလင်းမပြန်ဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်အတွက် Intel UHD Graphics (Integrated) ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကို တပ်ဆင်ထားပြီးပုံမှန်လုပ်ငန်းသုံးဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုမှုတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ ဂရပ်ဖစ်ကတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့လက်ဗွေနဲ့ Login ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ Finger Print Reader ပါဝင်တာကြောင့် အရင်ကလို Password အကြာကြီး ရိုက်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒေတာတွေအများကြီးနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရပြီးသွားသွားလာလာ Laptop အသုံးပြုဖို့လိုအပ်သူတွေအတွက်သင့်တော်တဲ့ “Business Class” စွမ်းရည်မြင့် Laptop ကောင်းတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။အာမခံတစ်နှစ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Designed for those on the go, the ThinkBook 14 is only 17.9mm thin so it's easy to slip it intoabackpack or under your arm. And with up to 10th Gen. Intel® Core™ i7 processing and Windows 10 Pro, this 35.56cms (14) business laptop enables you to tackle any task, anywhere.
The 355.6cms (14) FHD display is edged with narrow bezels, meaningascreen-to-body ratio of 80% and less distractions for you. There are also two Dolby Audio™ speakers delivering exceptional sound. And there's the option of discrete graphics for hi-res visual work, videos, or even some gaming.